Cryptocurrency ụkpụrụ obụp mi ke Vermont
A ala omeiwu na Vermont ka chọrọ a iwu ike ọhụrụ usoro iwu kpuchie maka ojiji nke blockchain technology.
Ke adianade mandating ọtụtụ akụkọ na cryptocurrencies na blockchain, ọ Ichi obụk otú steeti nwere ike were ụfọdụ sịrị ka “digital ego mmachi ibu ụlọ ọrụ,” karịsịa ndị na-arụ ọrụ ha onwe ha na netwọk.
Ndị ụlọ ọrụ ga-, ma ọ bụrụ na ụgwọ mma, -akwụ “n'ụdị ya digital ego a azụmahịa tax Ẹkot $ 0.01” mgbe ọ bụla a ọhụrụ unit nke cryptocurrency na-kere, ahịa ma ọ bụ bufee.
“A dijitalụ ego mmachi ibu ụlọ ọrụ bụ hapụrụ ụtụ isi ma na ọdabara” -agụ ụgwọ.
The ọhụrụ ụgwọ na-akpọ maka a “Fintech Summit,” nke ga-eme ka ọnụ ala na ụlọ ọrụ nketa oke iji kwurịta otú Vermont nwere ike kwalite tech si wider ojiji. The ala ga-arara $25,000 iji nyere ego na ihe omume, n'okpuru nkwado nke Agency nke Commerce and Community Development.
JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon akwa ụta si Bitcoin bụ a wayo
JPMorgan Chase onyeisi oche & CEO Jamie Dimon kwuru Tuesday ọ akwa ụta gara aga kwuru na nke ọ kpọrọ Bitcoin a wayo na a September ichekwa ego na bank ogbako.
Oge ahụ, Dimon kwuru na ya ga-ọkụ JPMorgan ahịa ma ọ bụrụ na ha jiri na kaadị-ego.
"The ngọngọ yinye dị adị. Ị nwere ike kaadị yen na dollars na stof ka…"Dimon kwuru na nanị N'ajụjụ ọnụ Fox Business.
The bitcoin m mgbe niile bụ ihe ndị ọchịchị na-etinyecha obi na-adị bitcoin dị ka ọ na-akawanye n'ezie nnukwu, na m dị nnọọ nwere echiche dị iche karịa ndị ọzọ. Enweghị m mmasị na ọtụtụ ihe na-isiokwu na niile.
US Federal Reserve Bank President: Bitcoin bụghị a credible osompi na US dollar
Bitcoin na ndị ọzọ na digital ego na-adịghị na-anọchi anya a dị ịrịba ama iyi egwu ahụ U.S. dollar, Minneapolis nri President Neel Kashkari kwuru.
“M na-adịghị ahụ bitcoin ka a credible osompi na dollar na United States of America, na ihe kpatara ya bụ ihe mgbochi nke ntinye ị na-eke gị onwe gị na mkpụrụ ego na m na-eke m mebere ego … bụ efu,” ọ sịrị n'oge a ọha na anya na Minnesota.
Kashkari kwetara na bitcoin na ndị ọzọ na cryptocurrencies nwere ike na-na a òkè ka ukwuu n'ụwa nile na-eme n'ọdịnihu, ma o kwuru n'ihi na ugbu a ha na-anọgide a ajụjụ akara.
“N'ihi ya, e bụ niile ọhụrụ ndị a alt mkpụrụ ego e kere ụbọchị ọ bụla, na mgbe ị pụrụ ikwu na e nwere bụ naanị ọtụtụ bitcoins na-aga na-mined, ma ọ bụrụ na ya Nwela muddled na ọzọ ndị a nile alt mkpụrụ ego i nwere ike ka na-enwe onu oriri, n'ihi na ị na-amaghị nke ndị na-atụkwasị obi,” ọ si. “M nnọọ na-eche na nke a nwere a ogologo ụzọ nke na-aga n'ihu anyị maara otú a emee ka anya doo si.
Bitcoin futures ahịa bụ oghe maka Thailand si investors
Phillip Securities Thailand kwere Thai investors ịkọ nkọ na bitcoin via mba uwa nkwekọrịta trading ọrụ, mgbe Thailand si ahịa regulators nọ otutu mmadu kwenyere na-aga bụ ziri ezi.
Ozi dị otú ahụ na-enye bitcoin futures trading na Chicago Board Nhọrọ Exchange (CBOE) na Chicago Mercantile Exchange (CME).
Ijikwa director Low See Kiong kwuru ụfọdụ Thai investors nwere mmasị na-bitcoin na ike na-anabata ego ize ndụ dị na mmadụ futures.
“Iji bitcoin dị ka ihe na-ewe akpan owo na CBOE na CME ga-eduga ukwuu nabata bitcoin futures dị ka ha nwere pụrụ ịdabere na ugwo usoro na na-usoro US Securities na Exchange Commission,” Mr Low kwuru na a pịa ntọhapụ.
“ebe ọ bụ na nke a [ego] ngwaahịa a bụ n'okpuru nlekọta nke a etozu usoro iwu ahu, a n'ókè nke nchegbu na nke a bụ banyere wayo ma ọ bụ ego Laundering, kama otú ngwaahịa a nwere nnukwu ihe ize ndụ,” kwuru na nkwupụta.
Prime Minister Prayut Chan-o-cha nso nso gwara Finance Ministry ịkụziri ndị mmadụ banyere ihe ize ndụ nke bitcoin ego.
Switzerland malite Blockchain ọrụ ike
The Swiss ọchịchị ka ulo oru a ọhụrụ otu ciment ya usoro iwu kpuchie gburugburu blockchain startups na ICOs.
Taskforce Blockchain - ebute ụzọ na Finance Minister Ueli Mausrer na Economics na Education Minister Johann Schneider-Ammann - agụnye ma gọọmenti etiti na ndị ọchịchị obodo, nakwa dị ka òtù dị iche iche na blockchain startups na iwu ndị nnọchiteanya, dị ka a akwụkwọ.
The otu ga-ele anya na nke iwu ụkpụrụ nduzi gburugburu ICOs na blockchain ụlọ ọrụ, na-arụ ọrụ na State Secretariat for International Financial Matters - gọọmenti etiti ahu maka mmejuputa ego ahịa iwu na-anọchite anya gọọmenti ego ọdịmma gafee ala.
Schneider-Ammann toro Nsonye nke blockchain ụlọ ọrụ na-akparịta ụka gburugburu ha iwu kpuchie.
o kwukwara,: “Blockchain na-aghọ ndị ọzọ dị mkpa dị ka a technology maka ọtụtụ ọrụ, bụghị naanị kaadị ego. Ihe dị mkpa na-emesapụ iwu, nke ga-emepe ohere maka Switzerland ọkwá ma n'otu oge mbenata ihe ize ndụ.”
The Taskforce Blockchain si nzukọ mbụ ga-na Jan. 12, 2018.
First esiri arịrịọ maka poolu osụk
A ogologo guzo amaghị wetara “echeta” smart contracts na bitcoin isi net ka e otu nzọụkwụ nso mmejuputa.
Mmepe na osụk a esiri arịrịọ maka Merkelized Abstract ahazi ahịrịokwu Osisi (poolu), marking oge mbụ a smart contracts amaghị kemgbe isiokwu nke a esiri arịrịọ achọ ya mwekota n'ime bitcoin si koodu.
Ndị a onwe smart contracts ga-ekwe ka ndị ọrụ na-akọwa ha nke ibiere nke a ugwo ga-hazie, eme multiple ihe a ga-atụle site na usoro ihe omume. The smart contracts ga-ahụ na e kpere na ha onwe ha.
The Nchikota BIPs ga-ekwe ka ihe ndị a smart contracts na-echekwara na a kọmpat n'ụzọ na n'ezie bitcoin blockchain, nke pụtara na ha agaghị elu a nnukwu ego nke ngọngọ ohere, ma ọ bụ ego nke data na ike ga-echekwara n'ime onye ọ bụla ngọngọ nke azụmahịa.
Ọ bụrụ na mmepe na nabatara umu bitcoin obodo kwadoro mgbanwe, ọ nwere ike na-atụkwasịkwara Bitcoin site n'ụzọ nke a adụ ndụdụ.
A isi iyi news.hodlhodl.com
Metatron tọhapụrụ ČR ...
Àmụmà Labs emepụta a "ụlọ nche" iji kụda Lightning-scams.
Echiche nke PR ...
Putin: Russia kwesịrị ọganihu kaadị na blockchain technology
Previous Post:Telegram ICO atụmatụ
Next Post:Ònye mere nnukwu onyinye kaadị ụlọ ọrụ? Top 7